बच्चालाई कोरोना भए घरमा नै उपचार सम्भव, थाहा पाउनुहोस् कसरी गर्ने हेरविचार ! - Sidha News
बच्चालाई कोरोना भए घरमा नै उपचार सम्भव, थाहा पाउनुहोस् कसरी गर्ने हेरविचार !
यस्ता बालबालिकामा केही दिनपछि घाँटी खराब हुने, नाक बग्ने, सास फेर्न गाह्रो नभइकन खोकी लाग्नेलगायतका समस्या देखिन सक्छ । केही बालबालिकाको पेट पनि खराब हुनसक्छ । यस्ता बालबालिकालाई आइसोलेट गरेर लक्षणको आधारमा उनीहरुको उपचार गर्ने गरिन्छ । यदि उनीहरुलाई ज्वरो आउँछ भने डाक्टरको सल्लाह अनुसार प्यारासिटामोल दिन सकिन्छ ।
लक्षण नदेखिएका बालबालिकाको अक्सिजनको स्तरलाई अक्सिमिटरको सहायताले लगातार निगरानी राख्नुहोस् । यदि अक्सिजनको स्तर ९४ प्रतिशतभन्दा कम हुन थाले, डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् । यदि कोही बालबालिका जन्मजात नै मुटुरोगी छन्, लामो समयदेखि फोक्सोको रोगबाट ग्रसित छन्, कुनै अंगले राम्रोसँग काम गरेको छैन वा मोटोपनाजस्ता रोगबाट ग्रसित छन् भने डाक्टरको सल्लाहमा घरमा नै हेरविचार गर्न सकिन्छ ।
डाइटः बच्चाको शरीरमा पानीको सही मात्रा स्थापित गर्नका लागि नरिवलको पानी, दालको रस, फलफूलको जुससमेत पौष्टिक आहार र सजिलै पच्ने खाना दिनुहोस् । इमर्जेन्सीः यदि बच्चाको लक्षण लगातार बिग्रन थाले, अक्सिजनको स्तर घट्न थाले तत्काल अस्पताल पुर्याउनुहोस् ।